Guddoomiyaha Hay'adda Qurbajoogga iyo wefti weheliyay oo kala qayabgalay Jaalliyadaha Somaliland ee Maraykanka Xuska 18 May 2018.
Monday 14th May 2018 11:23:08 in Aragtida Dadweynaha by Xafiiska Burco
Guddoomiyaha Hay'adda Qurbajoogga Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Cabdi Cabdullaahi Xirsi (Dayaxweerar)
ayaa kala qaybgalay Jaalliyadaha Somaliland ee dalka Maraykanka xafladaha loogu debbaal-degayo xuska 18 May 2018 gaar ahaan magaalooyinka Washington DC, iyo Minnesota oo qabsoomay 11-kii iyo 12-kii May, isla markaana maanta gaadhay magaalaa Ohio ee gobolka Columbus oo uu kala qaybgalayo jaalliyadaha Somaliland ee gobolkaas xafladda debbaal-degga maalinta qaran ee xuska 18 May 2018.
Weftigan oo Guddoomiyaha Hay’adda Qurbajoogga uu ku weheliyo Mudane Siciid Daahir Siciid oo ka mid ah aqoonyahanka reer Somaliland ee mudada dheer ku noolaa dalka Maraykanka, immikana ku jiray wufuudda Wasaaradda Arrimaha Debadu u kala dirtay wadamada debadda qaarkood gaar ahaan Woqooyiga Maraykanka; ayaa ugu horrayn ka qaybgalay xaflad si aad u heer sarraysa ay usoo agaasimeen Jaalliyadda Somaliland Washington Community oo 11-kii May ka dhacday Washington DC. Waxa iyaguna ka soo qaybgalay xafladda oo lagu soo martiqaaday qaybaha bulshada kala duwan Gudida Jaalliyadda, masuuliyinta ka socday xisbiyada qaranka, odayaasha jaalliyadda, fannaaniin iyo kooxaha fanka iyo suugaanta.
Jaalliyadda Somaliland Washington Community ayaa munaasibadaas shahaado sharaf ku guddoonsiiyay Guddoomiye Dayaxweerar. Masuuliyiinta kala duwan ee xafladahan ka hadlay ayaa khudbado taariikhi iyo dhiirigelin ah u jeediyay ka soo qaybgalayaasha xafladaha iyaguu ku hambalyeeyay u debbaal-degga sannad-guurada 27aad 18 May 2018, isla markaana ugu baaqay qurbajoogga Somaliland inay u midoobaan iskaashiga danahooda, wadajirkooda, waxwada qabsigooda iyo waxtarka dalkooda Jamhuuriyadda Somaliland. Guddoomiye Dayaxweerar ayaa khudbaddiisa ku soo qaatay qodobo badan oo ahmidyad u leh abaabulka iyo midnimada jaalliyadaha Somaliland ee dalka maraykanka iyo Qurbajoogga guud ahaan, sida xagga diwaangelinta, samaynta sanduuqa Qurbajoogga iyo nidaamyo maamul la xidhiidha, waxanu ugu baaqay jaaliyadda Somaliland ee Maraykanka inay dib u dhisaan dalladii Somaliland Forum ee aqoonyhanka qurbajoogga Somaliland Maraykanku lahaayaan jireen.